तौल घटाउन खाना छाड्ने कि व्यायाम गर्ने ? - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
मोटोपन भए के गर्ने ? धेरैलाई लाग्छ, ‘खान छाड्ने ।’ नियमित खुराक कटौती गरेपछि मोटोपन बढ्दैन भन्ने लाग्छ । त्यसैले त मोटोपन घटाउने चक्करमा धेरैले आफ्नो छाक छाडिरहेका हुन्छन् । तर, खाना छाड्दैमा मोटोपन घट्दैन । बरु यसले कमजोरी र शरीरमा पोषणको अभाव हुनसक्छ ।
मोटो व्यक्तिलाई सुरु सुरुमा स्टे«चिङ्ग गर्न अप्ठेरो हुनसक्छ । यदी साच्चै नै स्टे«चिङ गर्न गा¥हो छ भनेर हल्का टहलिनु पनि काफी छ । तर टििहलन सुरु भएको एक दुई हप्ताबाटै हातखुट्टालाई तन्काएर स्ट्रेचिङ्ग भने अवश्य गर्नु पर्छ । हात ताथ खुट्टाको स्ट्रेचिङ्ग गर्दा हातलाई फैलाएर खुट्टाको बलले हल्का उफ्रनुपर्छ ।